Toca Kitchen2Android အတွက်ဒေါင်းလုပ်ပြုလုပ်ပါ
ပင်မစာမျက်နှာ » ပျော်စရာ & ဂိမ်းများ » ကလေးတွေ » Toca မီးဖိုချောင် 2
Toca မီးဖိုချောင်2APK ကို
အဆိုပါလှသောလူကြိုက်များ Toca မီးဖိုချောင်ပြန်ရောက်ပါ! ထွက်စမ်းသပ်ဖို့အတှကျချက်ပြုတ်အသစ်ဧည့်သည်များနှင့်အတူဆော့ကစားဖို့ပို tools များနှင့်အသစ်အစားအစာပေါင်းစပ်နှင့်အတူ, Toca မီးဖိုချောင်2ရှုပ်ထွေးရကစားခြင်းကိုစတင်အားလုံးစားဖိုမှူးကဖိတျချေါ!
အဘယ်သူသည်ဟင်းလျာများတော်တော်နှင့်အရသာဖြစ်ဖို့ရှိသည်သနည်းဟုမေး သင်အလိုရှိသို့သော် Toca မီးဖိုချောင်2၌သင်တို့ကိုချက်ပြုတ်နိုငျပါသညျ! ဖျော်ရည်ခရမ်းချဉ်သီး, အသုပ်ပြုတ်တစ်ခုသို့မဟုတ်ဘာဂါပါစေ။ သင့်ရဲ့အလွန်ကိုယ်ပိုင်ချက်ပြုတ်နည်းများအတူတက် လာ. အထူးတစ်ခုခုရန်သင့်ဧည့်သည်များဆက်ဆံပါ။
ကနေရှေးခယျြဖို့ခြောက်လကွဲပြားခြားနားသောမီးဖိုချောင် tools များနှင့်အတူ, သင်ပျော်စရာအစားအစာများကိုပြင်ဆင်နေသည်ပြီးပြည့်စုံ setup ကိုရှိသည်! , သင့်အကြိုက်ဆုံးပါဝင်ပစ္စည်းများအတူတက် load Messi တစ်ညှစ်ထည့်လိုက်တယ်တစ်ဦးဖြစ်တော့နှင့်အတူချွတ်ပြီးအောင်လုပ်ပါ။ သင့်ရဲ့ဧည့်သည်တစ်ဦးကိုက်ပါစေရန်အချိန်! ကဆုရခဲ့သလား
သူတို့ရဲ့တုံ့ပြန်မှုကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်သင့်ဧည့်သည်များ '' ဦးစားပေးရှာဖွေပါ။ မီးဖို-ဖုတ်ငါးဦးခေါင်းကိုညာဘက်တက်လာမယ့်ကြော်စားစားကြွင်းစားကျန်များနှင့်ဆလတ်ဖျော်ရည်နှင့်အတူ! Oh, သူတို့ကကြိုက်နှစ်သက်သည်မဟုတ်လော အချို့ဆားထည့်သွင်းကြိုးစားပါ။ ဒါဟာ "EW" ရဖို့ပျော်စရာပဲ!
Watch ဇာတ်ကောင်စပ်ပူငံပြာရည်နှင့်အချဉ်သံပုရာတုံ့ပြန်သို့မဟုတ်နှင့်အသံကျယ် burps ပြုံးရယ်။
အနည်းဆုံးနောက်ဆုံးသော်လည်းမမှာကျနော်တို့ဇာတ်ကောင်မှ gross ပိုမိုအဆင့်ဆင့်ကဆက်ပြောသည်။ ပျော်ရွှင်ပါစေ!
- နယူး juicer နှင့်မီးဖို
- နက်ရှိုင်းသော fryer! သငျသညျယခုနက်ရှိုင်းဘာမှကြော်နိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့အပေါ်ယံလွှာအပေါ်ကိုရယူပါ။
- အဘယ်သူမျှမစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေသို့မဟုတ်စိတ်ဖိစီးမှု - ရုံဖွင့်, ဆိတ်သငယ်-ညွှန်ကြားပျော်စရာ!
- အဘယ်သူမျှမ Third-party ကြော်ငြာ
မင်းဘာစောင့်နေတာလဲ? မီးဖိုချောင်ထဲမှာ Get နှင့်ချက်ပြုတ် start!
Toca မီးဖိုချောင်2စားဖိုမှူးအယောင်ဆောင်ဘို့ပြီးပြည့်စုံသောင့်လေးတွေများအတွက်အခမဲ့ချက်ပြုတ် App ဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးများအရသာရှိတဲ့အစားအစာနှင့်ပါဝင်ပစ္စည်းများနှင့်ပြည့်ဝ၏တစ်ဦးမီးဖိုချောင်အတွက်စားဖိုမှူး roleplay နိုငျပါသညျ! ဆာလောင်မွတ်သိပ်ဖောက်သည်ကျွေးမွေးဖို့ပျော်စရာပေါင်းစပ်နှင့်အတူသင်အကြိုက်ဆုံးဟင်းသို့မဟုတ်စမ်းသပ်မှုချက်ပြုတ်ဖို့ဘယ်လိုလေ့လာပါ။ ဒါကပျော်စရာချက်ပြုတ် app ကိုကလေးတွေအတွက်ပျော်စရာပေမယ့်ဘာမျှမကယ်မနှုတ်ဖို့သေချာပါ!
မရှိအချိန်ကန့်သတ်သို့မဟုတ်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုအမှားအမှန်, ရဲ့, ဒီတော့မီးဖိုချောင်ကမ်းလှမ်းရန်ရှိပြီးအပေါငျးတို့သပါဝင်ပစ္စည်းများနှင့် tools တွေကိုစူးစမ်းလေ့လာ! တချို့အရူးအစားအစာထချက်ပြုတ်နှင့်သင့်ဧည့်သည်များအစာကျွေး။
Toca မီးဖိုချောင်2ကစားမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
109.55 ကို MB